Editor – GEELLE MAG
Waxaad nagula wadaagi kartaa wararka, warbixinada, fikirada iyo waliba fallooyinka Email: Editor@geellemag.com Geelle Magazine waxa lacag ah kuma qaato si uu ula wadaago wararka, warbixinada, fikirada iyo fallooyinka bulshada.
Ded deg: Maraykan oo wareeray Gaari Albaqdaadi saarnaa
Editor Posted On October 27, 2019
Warar hordhac ayaa sheegaya in hogaamiyihii ururka dawladda Islaam ka lagu diley weerar ay ciidamada cirka Maraykanka ka gaysteen magaalada Idlib. Saraakiil Turki ah ayaa sheegay in hogaamiya ISIS uu soo gaaray goobta weerar ku ka dhacay 48 sacadood ka […]
Faallooyin / Wararka
Shalay oo Sabti ahayd waxaa furmay kalfadhiga 45-aad ee Golaha Wakiilada Maamul Puntland. Waxaa kasoo qeybgalay Madaxweynaha, Saciid Cabdullaahi Deni. Kasoo qayb galka madaxweynaha ayaa ah mid dastuuri ah. Kalfadhiga ayaa xambarsanaa dareen siyasadeed ee u dhexeeya gudoomiyaha iyo madaxweynaha. […]
Hay’ad ka digtay dhibaatooyinka Daadadka gobolka Hiiraan
Save the Children Posted On October 25, 2019
Muqdisho, Oktoobar 24-keedii, 2019. Hay’adda Save the Children waxay ka walaacsantahay saameynta fatahaaddo ka dhaca magaalada Beledweyn iyo nawaaxigeeda ee gobolka Hiiraan ee Soomaaliya, sababtoo ah heerka sare ee biyaha Webiga Shebelle. Marka loo eego xogta ay soo saartay Macluumaadka […]
Save the Children oo ceelal ka qodaysa deeganada Puntland
Editor Posted On October 24, 2019
Ceelashan ayaa biyo siinaya dadka tuulooyinka iyo deeganad ku dhow. Waxa la rajaynayaa in kabadan 100,000 oo qof in ay biyo ka helaan todobo ceel oo laga qodayo deegaanada Puntland. Mudane Maxamuud Maxamed Xasan iyo Wasiirka Wasaaradda Biyaha ee Puntland, […]
Save the Children oo Iskuulo dhagax dhigtay Puntland
Editor Posted On October 23, 2019
Save the Children waxay sii wadaa tageeraada ay la garab taagantahay bulshada iyo dowladda Puntland si loo kobciyo adeega waxbarashada carruurta Soomaaliyeed iyo dhisidda kaabayasha ka hortagga afooyinka ay ka mid tahay abaaruhu, ayey sheegeen hogaamiyaasha hay’adda xilli ay dhagax […]
Daawo: dadka sidee u arkeen tallooyinka did Xamar looga taagay
Editor Posted On October 20, 2019
Degdeg: Norway oo balan qaaday inay Soomaaliya deynta ka cafinayso.
Editor Posted On October 10, 2019
Dawladda Norway ayaa sheegtay inay cafin doonta aamahda ay ku ledahay Soomaaliya sanadda 2020 haddii ay ka hesho deyn cafis wadamada Ku jira kooxda Paris. Norway ayaa Soomaaliya ku leh lacag 16 milyuun oo lacagta wadankooda ah. Noraway waxa ay […]
Daawo: Shiikh Shariif oo u goodiyey Farmaajo
Editor Posted On September 23, 2019
Cali Axmed Posted On September 13, 2019
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa Saxaafada la hadlay markii ugu horaysay kadib Doorashadii 22-ka Agoosto 2019-ka lagu qabtay Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose. Hadalkiisa ayaa iminaya iyada oo ay dawladda Federal ku u muuqato mid wali ku adkaysanaysa […]
Toos: Soomaaliya iyo Simbabwi
Editor Posted On September 10, 2019